Chii chinonzi Net Kusatsigira? | Martech Zone
Chii chinonzi Net Kusatsigira?
Mugovera, March 10, 2007 Svondo, Gunyana 30, 2012 Douglas Karr
Iko kune kumwe kusarangarira pano futi. Mabhizinesi senge Akamai already help businesses to ‘speed up' their content delivery on the net:
Iyo Akamai EdgePlatform ine makumi maviri emaseva akaiswa munyika makumi manomwe nenomwe anoramba achiona Internet? traffic, nzvimbo dzekunetseka uye mamiriro ese. Isu tinoshandisa ruzivo irworwo kugadzirisa zvine hungwaru migwagwa uye kudzokorora zvirimo kuti ikurumidze, kutendeseka kutakura. Sezvo Akamai achibata 20,000% yeiyo yakazara Internet traffic nhasi, maonero edu eInternet ndiwo akazara uye akasimba anounganidzwa chero kupi.
Saina chikumbiro uye upe ku Sevha iyo Internet.
Triangle yeBlogging: 3 Zvinhu Zvekubudirira
Mar 10, 2007 pa 11: 06 AM
Ndichiri kuvhiringidzika nezve izvo Net Neutrality chaizvo zvazviri. Iwe unogona here kupa indept ruzivo?
Mar 10, 2007 pa 11: 18 AM
Ivo vanhu vane nzira huru dzeInternet vangade kugadzira nzira mbiri dze traffic. Imwe nzira (sezvazviri ikozvino) ingave yakajairika internet nzira. Imwe nzira; zvisinei, inogona kunge iri nzira iyo telecoms inogona kubhadharisa nekukurumidza, zvirinani bandwidth yekubhadhara vatengi.
Pfungwa iri shure kwayo ndeyekuti mabhizinesi ari pamutemo anogona kubhadhara kunatsurudzwa kuendesa kwavo zvemukati kwauri kana kwandiri. Nenzira iyi havafanirwe kunetseka nezvekuwana traffic kuburikidza nepo iripo traffic. Kana iwe ukarova Google semuenzaniso, uye ivo vari kubhadhara iyo yakawedzera bandwidth, webhusaiti yavo yaizokwanisa kurodha zvakanyanya nekukurumidza.
Pepa, zvinonzwika zvakanaka. Nekudaro, mhedzisiro yacho inogona kuve ine njodzi. Pangasave nechikurudziro kumakambani aya kuvandudza mashandiro uye zvigadzirwa zveInternet iwe neni. Muchokwadi, zvakapesana chaizvo zvingave zvechokwadi. Kana ivo vakarega iyo 'yakajairika' nzira dzeInternet kudonha mukuita, zvinokwezva rimwe bhizinesi kune iyo 'bhizinesi' nzira.
Parizvino, kana Verizon kana AT & T kana Comcast ichivandudza network yavo uye bandwidth, vose anoona kuvandudzwa. Ndiko 'kwazvakarerekera' muNet Neutrality. Vanhu vakaita seni vangada kuzvichengeta zvakadaro. Kana vakomana ava vakavaka inokurumidza, zvirinani network yaunofanirwa kubhadhara mukati, iwe neni tichava kunze kwebhizinesi. Vanhu havazonetseki nekuuya kumasosaiti edu nekuti zvinongononoka.
Pamudzi wekushushikana kwangu ndekwekuti, kunyangwe, makambani aya ari kuisa mari zvakanyanya muInternet - ivo havana kuigadzira. Yaive mari yemuteresi yeUS yakabvisa iyo Internet pasi… hatifanire kusara kumashure!
Mar 10, 2007 pa 11: 21 AM
Izvi zvakanangana neUS kana chimwe chinhu kwese kwese. Asi, ndinofungidzira sezvo vazhinji vedu vasiri vagari vemuUS vane nzvimbo dzakaitirwa muUS, zvinotikanganisa zvakanyanya.
Kuenda blog nezvazvo. Thanks 🙂
Mar 10, 2007 pa 11: 26 AM
Zvinogona kuitika chero kupi, asi kana zvikaitika muUS, mhedzisiro yacho yaizotsemuka kupfuura ipapo. Mamwe mabhizinesi makuru emunyika angangokwira pamusoro pechikwata zvakare, nekuti icho chingave chivakwa chingatsigire kusvika kuvanhu vazhinji. L'il ol 'vanhu vakaita sewe neni taizomanikidzwa kuita fork up imwe mari kana kusara muvhu.
Mar 10, 2007 pa 12: 15 PM
Yup, akazviziva izvozvo. Zvakanaka, ndinotarisira kuti havana kubudirira, kunze kwekunge vakwanisa "kupa" munhu wese abve.
Mar 13, 2007 pa 10: 11 AM
Mhoro Doug - Ini ndinoshanda nemaHands Off iyo Internet mubatanidzwa uye ndinokurudzira vaverengi vako kuti vatarise iyi vhidhiyo yekunzwisiswa kuri nani kweiyo net yekusarerekera gakava uye vatambi vanobatanidzwa. Uyezve shanyira Blog yedu kuti uwane rumwe ruzivo. Ndatenda!